Zụrụ 3D nyocha: otu esi ahọrọ nke kacha mma | ngwaike efu
Na mgbakwunye na inwe ike chepụta onwe gị geometry nke ibe ahụ ịchọrọ ibipụta na gị 3D ngwa nbipute iji software, enwekwara ohere ọzọ dị mfe nke nwere ike iṅomi ihe ndị dị adị nke ọma. Ọ gbasara 3d nyocha, nke ga-ahụ maka inyocha elu ihe ịchọrọ ma gbanwee ya ka ọ bụrụ usoro dijitalụ ka ị nwee ike imegharị ya ma ọ bụ bipụta ya ka ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe oyiri.
N'ime ntuziaka a, ị ga-achọpụta ihe ha bụ. ihe nyocha 3D kacha mma yana otu ị ga-esi họrọ nke kacha dabara adaba dị ka mkpa gị si dị.
Ihe nyocha 3D... Hụ atụmatụ Lee nkwa
Incen Pop 3D nyocha,... Hụ atụmatụ Lee nkwa
Na-egbuke egbuke 3D EINSCAN-SP -... Hụ atụmatụ Lee nkwa
Ihe nyocha HE3D... Hụ atụmatụ Lee nkwa
Nke kacha mma	Ihe nyocha 3D...
Ọnụahịa mma	Incen Pop 3D nyocha,...
Ihe kachasị amasị anyị	Na-egbuke egbuke 3D EINSCAN-SP -...
Ihe nyocha HE3D...
1 Ihe nyocha 3D kacha mma
1.1 3D na-enwu EINSCAN-SP
1.2 Na-egbuke egbuke 3D Uno Can
1.3 CR-nyocha Creality 3D
1.4 Ọnụ ego BQ
1.5 Incenn POP 3D Revopoint
2 Kedu ihe bụ nyocha 3D
2.1 Ihe nyocha 3D ka ọ si arụ ọrụ
2.2.1 Igwe nyocha 3D mkpanaka
2.2.2 ụlọ 3d nyocha
2.3 Ngwa nyocha 3D
2.4 Otu esi ahọrọ nyocha 3D
Ihe nyocha 3D kacha mma
Enwere ọtụtụ ụdị ama ama, dị ka German Zeiss a ma ama, Shining 3D, Artec, Polyga, Peel 3D, Phiz 3D Scanner, wdg, na-eme ka ọ sie ike ịhọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ gbasara nyocha 3D ị ga-azụta, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha. ụdị kachasị mma Ihe anyị na-akwado ka ịzụrụ nke ọma:
3D na-enwu EINSCAN-SP
Na-egbuke egbuke 3D EINSCAN-SP -...
Este Ihe nyocha 3D nwere teknụzụ ọkụ ọcha bụ otu n'ime ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọkachamara. Mkpebi ya ruru 0.05 mm, na-ewere ọbụna nkọwa kacha nta. Ọ nwere ike nyochaa ọnụọgụgụ site na 30x30x30mm ruo 200x200x200mm (ya na turntable) yana ụfọdụ ndị buru ibu nke 1200x1200x1200mm (ma ọ bụrụ na ejiri aka ma ọ bụ jiri ụkwụ mee ihe). Na mgbakwunye, ọ nwere ezigbo ọsọ nyocha, ikike mbupụ na OBJ, STL, ASC na PLY, sistemu mmezi akpaka, na njikọ USB. Dakọtara na Windows.
Na-egbuke egbuke 3D Uno Can
Na-egbuke egbuke 3d Uno nwere ike ịhụ Uno ...
Ihe nlereanya a nke ika a na-akwanyere ùgwù dị ọnụ ala karịa nke gara aga, mana ọ nwekwara ike ịbụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe maka ọrụ ọkachamara. jirikwa teknụzụ agba ọcha, nwere mkpebi nke 0.1 mm na ikike iṅomi ọnụ ọgụgụ site na 30x30x30 mm ka 200x200x200 mm (na turntable), ọ bụ ezie na ị nwekwara ike iji aka ya ma ọ bụ na ya tripod maka ọnụ ọgụgụ nke kacha nke 700x700x700 mm. Ọ nwere ezigbo ọsọ nyocha, ọ na-ejikọ site na USB, yana ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị faịlụ OBJ, STL, ASC na PLY dị ka nke gara aga. Dakọtara na Windows.
CR-nyocha Creality 3D
Creality 3D - ngwa nke...
Nnukwu ika a emepụtala ihe nyocha maka ịme ihe ngosi 3D dị mfe iji, na mgbanwe akpaka, na-enweghị mkpa nhazi ma ọ bụ iji akara. Ọ na-ejikọ site na USB ma dakọtara na Windows, Android na macOS. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere oke dị elu nke ruru 0.1 mm na mkpebi nke 0.5 mm, ma nwee ike zuru oke maka ọrụ ọkachamara n'ihi njirimara ya na àgwà ya. Banyere akụkụ nyocha, ha buru oke ibu, iji nyochaa akụkụ buru ibu.
Ọnụ ego BQ
BQ Ccyclop DIY 3D -...
Ihe nyocha 3D a sitere na akara Spanish BQ bụ nhọrọ ọzọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọnụ maka Mee N'onwe Gị. Igwe nyocha ziri ezi 0.5mm ngwa ngwa nwere igwefoto Logitech C270 HD dị mma, lasers linear Class 1 abụọ, njikọ USB, Nema stepper moto, ZUM ọkwọ ụgbọ ala, ike mbupụ na G-Code na PLY, na dakọtara na Linux na Windows sistem.
Incenn POP 3D Revopoint
Ihe nyocha POP 3D, 8fps,...
Nhọrọ ọzọ na ndị gara aga. Ihe nyocha 3D nwere a 0.3mm ziri ezi, Igwefoto Infrared Dual (Eye Safe), na igwefoto omimi, nyocha ngwa ngwa, Igwefoto RGB maka Texture Capture, OBJ, STL, na PLY Export Nkwado, Wired ma ọ bụ Ikuku Ikuku, 5 Modes dị iche iche nyocha ụzọ, na dakọtara na gam akporo, iOS, macOS na sistemụ arụmọrụ Windows.
Kedu ihe bụ nyocha 3D
Un Ihe nyocha 3D bụ ngwaọrụ nwere ike inyocha ihe ma ọ bụ ọnọdụ iji nweta data na udi, udidi, na mgbe ụfọdụ agba. A na-ahazi ozi ahụ ma gbanwee ka ọ bụrụ ụdị dijitalụ nwere akụkụ atọ enwere ike iji gbanwee ha na ngwa ngwa ma ọ bụ bipụta ya na ngwa nbipute 3D gị wee mepụta nnomi nke ihe ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ahụ.
Ụzọ nyocha ndị a si arụ ọrụ na-adịkarị anya, na-emepụta ígwé ojii nke ntụaka n'elu ihe ahụ iji mee ka ọdịdị geometry pụta ìhè. Ya mere, 3D nyocha dị iche na omenala ese fotoỌ bụ ezie na ha nwere oghere nlele nke yiri cone, igwefoto na-ejide ozi agba site na elu dị n'ime ebe ọhụụ, ebe nyocha 3D na-ejide ozi ọnọdụ na oghere akụkụ atọ.
Ụfọdụ nyocha anaghị enye ihe nlereanya zuru oke na otu nyocha, kama ọ dị mkpa ka ị nweta ọtụtụ gbaa iji nweta akụkụ dị iche iche nke akụkụ ahụ wee kpachie ya ọnụ site na iji ngwanrọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka bụ a ọtụtụ ihe ziri ezi, ntụsara ahụ na ngwa ngwa nhọrọ iji nweta geometry nke akụkụ ma nwee ike ịmalite ibipụta ya.
Ihe nyocha 3D ka ọ si arụ ọrụ
Ihe nyocha 3D n'ozuzu na-arụ ọrụ site na ụfọdụ radieshon ewepụtara dị ka a ìhè, IR, ma ọ bụ laser doo nke ga-agbakọ ebe dị n'etiti ihe na-emepụta ihe na ihe ahụ, na-edeba akara ngosi mpaghara na usoro ihe dị n'elu akụkụ nke a ga-edegharị, na nhazi maka nke ọ bụla. N'iji usoro nke enyo, ọ ga-ehichapụ elu ma nweta nhazi dị iche iche ma ọ bụ isi iji nweta ihe atụ nke akụkụ atọ.
Dabere na anya nke ihe ahụ, izi ezi achọrọ, na nha ma ọ bụ mgbagwoju anya nke ihe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ otu were ma ọ bụ karịa otu.
Enwere 2 ụdị nyocha 3D isi, dabere na ụzọ ha si nyochaa:
Kpọtụrụ: Ụdị nyocha 3D ndị a kwesịrị ịkwado akụkụ a na-akpọ tracer (na-abụkarị nchara siri ike ma ọ bụ sapphire) n'elu ihe ahụ. N'ụzọ dị otú a, ụfọdụ ihe mmetụta dị n'ime ga-ekpebi ọnọdụ oghere nke nyocha iji megharịa ọnụ ọgụgụ ahụ. A na-eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ maka njikwa usoro mmepụta yana na nkenke nke 0.01 mm. Otú ọ dị, ọ bụghị ezigbo nhọrọ maka ndị siri ike, bara uru (dịka ihe ọkpụkpụ akụkọ ihe mere eme), ma ọ bụ ihe dị nro, dịka ọnụ ma ọ bụ stylus nwere ike gbanwee ma ọ bụ mebie elu. Ya bụ, ọ ga-abụ nyocha na-ebibi ihe.
enweghị kọntaktị: ha bụ ndị kasị gbasaa na mfe ịchọta. A na-akpọ ha n'ihi na ha achọghị kọntaktị na ya mere ha agaghị emebi akụkụ ahụ ma ọ bụ gbanwee ya n'ụzọ ọ bụla. Kama nyocha, ha ga-eji mpụta nke ụfọdụ mgbaama ma ọ bụ radieshon dị ka ultrasound, ebili mmiri IR, ọkụ, X-ray, wdg. Ha bụ ndị kacha gbasaa na kacha mfe ịchọta. N'ime ndị a, n'aka nke ya, e nwere nnukwu ezinụlọ abụọ:
Aka: Ngwaọrụ ndị a na-enyocha ọdịdị nke ihe ahụ na, n'ọnọdụ ụfọdụ, agba. A na-eme ya site n'ịtụ elu ozugbo, na-atụle nhazi polar, akụkụ na anya iji kpokọta ozi geometric akụkụ atọ. Ekele niile n'ihi na ọ na-emepụta ígwé ojii nke isi ihe na-enweghị njikọ nke ọ ga-atụle site n'ịpụpụ ụfọdụ ụdị ọkụ eletrik (ultrasound, X-ray, laser, ...), na nke ọ ga-agbanwe ghọọ polygons maka nwughari na mbupụ na. ụdị CAD 3D.. N'ime ndị a ị ga-ahụ ụfọdụ subtypes dị ka:
Oge ụgbọ elu: ụdị nyocha 3D nke na-eji lasers ma na-ejikarị enyocha nnukwu elu, dị ka nhazi ala, ụlọ, wdg. Ọ dabere na NKE. Ha adịchaghị mma ma dị ọnụ ala.
Triangulation: Ọ na-ejikwa laser maka triangulation, na beam na-egbu ihe ahụ yana igwefoto nke na-achọpụta ebe laser na ebe dị anya. Ihe nyocha ndị a nwere izi ezi dị elu.
nkeji iche: na-atụ ihe dị iche n'usoro dị n'etiti ọkụ na-ebupụta na enwetara, na-eji nha a tụọ anya ebe ihe ahụ dị. Nkenkenke n'echiche a bụ etiti n'etiti abụọ gara aga, ntakịrị elu karịa ToF na ntakịrị ala karịa triangulation.
conoscopic holography: bụ usoro interferometric nke ọkụ na-egosipụta site na elu na-agafe na kristal birefringent, ya bụ, kristal nke nwere ihe nrịbama abụọ, otu ihe nkịtị na nke ọzọ na-enweghị atụ, nke bụ ọrụ nke nkuku nke ihe omume. ray n'elu iko. N'ihi ya, a na-enweta ụzarị abụọ yiri nke a na-eme ka ọ ghara iji oghere cylindrical mee ihe, nnyonye anya a na-ejide ihe mmetụta nke igwefoto a na-emekarị na-enweta ụkpụrụ nke fringes. Ugboro nke nnyonye anya a na-ekpebi ebe ihe dị anya.
ahaziri ìhè: wepụta ụkpụrụ ọkụ na ihe ahụ wee nyochaa nrụrụ ụkpụrụ nke geometry nke ebe ahụ kpatara.
modulated ìhè: ha na-ebunye ọkụ (ọ na-enwekarị cycles of amplitude na synodal form) na-agbanwe agbanwe na ihe ahụ. Igwefoto ga-ejide nke a iji chọpụta ebe dị anya.
Ibu oru: Ụdị nyocha a ga-enyekwa ozi anya site na iji ụfọdụ radieshon weghara ya. Ha na-ejikarị otu ụzọ igwefoto dị iche iche na-eduga n'ebe ihe nkiri ahụ iji nweta ozi akụkụ atọ site na nyochaa onyonyo dị iche iche ewepụtara. Nke a ga-enyocha anya na isi ihe ọ bụla wee nye ụfọdụ nhazi iji mepụta 3D. N'okwu a, enwere ike nweta nsonaazụ ka mma mgbe ọ dị mkpa ijide ihe dị elu nke ihe a na-enyocha, yana ọnụ ala. Ihe dị iche na ndị nọ n'ọrụ bụ na ọ nweghị ụdị radieshon electromagnetic na-apụta, mana ha na-amachi onwe ha naanị n'inweta ihe ndị dị ugbu a na gburugburu ebe obibi, dị ka ìhè a na-ahụ anya na-egosipụta na ihe ahụ. E nwekwara ụfọdụ ụdịdị dị ka:
stereoscopic: Ha na-eji otu ụkpụrụ ahụ dị ka fotogrammetry, na-achọpụta ebe dị anya nke pixel ọ bụla na oyiyi ahụ. Iji mee nke a, ọ na-ejikarị igwefoto vidiyo abụọ dị iche iche na-atụ aka n'otu ebe. N'ịtụle onyonyo nke igwefoto ọ bụla weghaara, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ebe ndị a dị anya.
Silhouette: jiri sketị emepụtara site na foto dị n'otu n'otu gburugburu ihe nwere akụkụ atọ gafeta ha iji mepụta mkpokọta ihe ahụ anya. Usoro a nwere nsogbu maka ihe ndị nwere oghere, ebe ọ bụ na ọ gaghị ejide n'ime ime.
Nlereanya dabere na onyonyo: Enwere ụzọ ndị ọzọ enyere ndị ọrụ aka dabere na fotogrammetry.
Igwe nyocha 3D mkpanaka
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ajụkarị ma ị nwere ike jiri smartphone dị ka a ga-asị na ọ bụ nyocha 3D. Nke bụ eziokwu bụ na mobiles ọhụrụ nwere ike iji ihe mmetụta igwefoto bụ isi ha wee nwee ike ijide ọnụ ọgụgụ 3D ekele maka ụfọdụ ngwa. O doro anya na ha agaghị enwe otu nkenke na nsonaazụ ọkachamara dịka nyocha 3D raara onwe ya nye, mana ha nwere ike ịba uru maka DIY.
ụfọdụ mma ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka IOS/iPadOS na gam akporo ị nwere ike budata ma gbalịa bụ:
ụlọ 3d nyocha
Ha na-ajụkarịkwa ma ị nwere ike mee nyocha 3d arụrụ n'ụlọ. Na eziokwu bụ na e nwere ọrụ maka ndị na-eme ihe nwere ike inyere gị aka nke ukwuu na nke a, dị ka Mepee. Ị ga-ahụkwa ụfọdụ ọrụ dabere na Arduino na enwere ike ibipụta iji kpọkọta ha n'onwe gị dị ka nke a, na ị pụrụ ọbụna ịhụ otu esi atụgharị xbox kinect ka ọ bụrụ nyocha 3d. N'ụzọ doro anya, ha dị mma dị ka ọrụ DIY na maka mmụta, mana ị gaghị enwe ike nweta otu nsonaazụ ahụ dị ka ndị ọkachamara.
Ma Ngwa nyocha 3D, enwere ike iji ya mee ihe maka ọtụtụ ojiji karịa ka ị nwere ike iche n'echiche:
ngwa mmepụta ihe: Enwere ike iji ya mee ihe maka ịdị mma ma ọ bụ njikwa akụkụ, iji hụ ma akụkụ ndị a na-emepụta na-ezute ihe ndị dị mkpa.
Gbanwee injinia: ha bara uru nke ukwuu iji nweta ezigbo ụdị dijitalụ nke ihe iji mụọ ya na imepụtaghachi ya.
Akwụkwọ arụrụ arụ: Enwere ike nweta ụdị ziri ezi nke ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe owuwu iji rụọ ọrụ, mmezi, wdg. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịhụ mmegharị, nrụrụ, wdg, site na nyocha ụdịdị.
dijitalụ ntụrụndụ: Enwere ike iji ha na-enyocha ihe ma ọ bụ ndị mmadụ iji mee ihe na fim na egwuregwu vidiyo. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike nyochaa ezigbo onye ọkpụkpọ bọọlụ wee mepụta ụdị 3D iji mee ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya na egwuregwu vidiyo.
Nyocha na ichekwa ihe nketa omenala na akụkọ ihe mere eme: Enwere ike iji ya nyochaa, dekọọ, mepụta ndekọ dijitalụ, ma nyere aka n'ichekwa na idobe ihe nketa omenala na akụkọ ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, iji nyochaa ihe ọkpụkpụ, nkà mmụta ihe ochie, mummies, ọrụ nka, wdg. A nwekwara ike ịmepụta ihe nnochite anya iji kpughee ha nakwa na ndị mbụ adịghị emebi emebi.
Mepụta ụdị ndapụta dijitalụ: enwere ike nyochaa ọnọdụ ma ọ bụ gburugburu iji chọpụta elu ala, gbanwee egwu ma ọ bụ odida obodo ka ọ bụrụ usoro 3D dijitalụ, mepụta maapụ 3D, wdg. Enwere ike iwere onyonyo site na nyocha laser 3D, site na RADAR, site na onyonyo satịlaịtị, wdg.
Otu esi ahọrọ nyocha 3D
N'oge họrọ nyocha 3D kwesịrị ekwesị, Ọ bụrụ na ị na-ala azụ n'etiti ọtụtụ ụdị, ị kwesịrị ị nyochaa usoro nke njirimara iji chọta nke kacha mma maka mkpa gị na mmefu ego ị nwere iji tinye ego. Isi ihe ị ga-eburu n'uche bụ:
Ego: Ọ dị mkpa ikpebi ego ole ị nwere ike itinye na nyocha 3D gị. Enwere site na € 200 ma ọ bụ € 300 ruo ndị ruru puku kwuru puku euro. Nke a ga-adaberekwa ma ọ ga-abụ maka iji ụlọ, ebe ọ na-abaghị uru itinye ego dị ukwuu, ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ọkachamara, ebe ntinye ego ga-akwụ ụgwọ.
nkenke: bụ otu n'ime njirimara kachasị mkpa. Nke ka mma nke ọma, nsonaazụ kacha mma ị nwere ike nweta. Maka ngwa ụlọ, izi ezi dị ala nwere ike zuo oke, mana maka ngwa ndị ọkachamara ọ dị mkpa ka ị bụrụ ihe ziri ezi iji nweta nkọwa kacha nta nke ụdị 3D. Ọtụtụ ihe nyocha azụmaahịa na-adị n'etiti 0.1 mm na 0.01 mm, site na nke pere mpe ruo nke ọma karị.
Mkpebi: ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na nkenke, ọ bụ ezie na àgwà nke ụdị 3D nwetara ga-adaberekwa na ya. Ọ bụ ezie na izi ezi na-ezo aka n'ogo nke izi ezi zuru oke nke ngwaọrụ ahụ, mkpebi bụ opekempe anya nwere ike ịdị n'etiti isi ihe abụọ n'ime ụdị 3D. A na-atụkarị ya na millimeters ma ọ bụ micron, ma nke nta ka ọ na-arụpụta nke ọma.
Na-enyocha ọsọ: bụ oge ọ na-ewe iji mee nyocha ahụ. Dabere na teknụzụ eji eme ihe, enwere ike tụọ ihe nyocha 3D n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-atụ ihe nlebanya ọkụ ahaziri ahazi na FPS ma ọ bụ okpokolo agba kwa nkeji. Enwere ike tụọ ndị ọzọ na isi kwa nkeji, wdg.
Ala nke iji: Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ nyocha 3D. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị adịlarị mfe iji ma nwee ọganihu zuru oke iji nweta ọrụ ahụ na-enweghị ọtụtụ ntinye onye ọrụ, ị ga-ahụkwa ụfọdụ mgbagwoju anya karịa ndị ọzọ.
nha akụkụ: Dịka ndị na-ebi akwụkwọ 3D nwere oke oke, ihe nyocha 3D na-emekwa. Mkpa onye ọrụ kwesịrị ka digitize obere ihe abụghị otu onye chọrọ iji ya maka nnukwu ihe. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji ha nyochaa ihe dị iche iche nha, yabụ na ha kwesịrị dabara na nke kacha nta na oke oke ị na-egwu.
Mbugharị: Ọ dị mkpa iji chọpụta ebe a na-eme atụmatụ ịgba égbè, na ma ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ìhè iji na-ebugharị na ijide ihe nkiri na ebe dị iche iche, wdg. Enwekwara ndị nwere batrị ka enwere ike ijide n'akwụsịghị akwụsị.
Mmekọrịta: Ọ dị mkpa ịhọrọ nyocha 3D dakọtara na ikpo okwu gị. Ụfọdụ bụ cross-ikpo okwu, na-dakọtara na sistemụ arụmọrụ dị iche iche, mana ọ bụghị ha niile.
software: Ọ bụ ihe na-eme ka nyocha 3D n'ezie, ndị na-emepụta ngwaọrụ ndị a na-emekarị ihe ngwọta nke ha. Ụfọdụ na-enwekarị ọrụ ndị ọzọ maka nyocha, ịmegharị ihe, wdg, ndị ọzọ dị mfe. Ma kpachara anya, n'ihi na ụfọdụ n'ime mmemme ndị a dị ike n'ezie, ha chọkwara ụfọdụ ihe achọrọ na kọmputa gị (GPU, CPU, RAM). Ọzọkwa, ọ dị mma na onye nrụpụta na-enye nkwado dị mma na mmelite ugboro ugboro.
Mmezi: Ọ dịkwa mma na a na-edobe ngwaọrụ njide ngwa ngwa na ngwa ngwa o kwere mee. Ụfọdụ ihe nlebanya 3D chọrọ nlele ọzọ (nhicha nke optics,…), ma ọ bụ ha chọrọ nhazi akwụkwọ ntuziaka, ndị ọzọ na-eme ya na-akpaghị aka, wdg.
Ọkara: Ọ dị mkpa iji chọpụta ihe ọnọdụ ga-abụ n'oge ijide ihe nlereanya 3D. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike imetụta ụfọdụ ngwaọrụ na teknụzụ. Dịka ọmụmaatụ, oke ọkụ, iru mmiri, okpomọkụ, wdg. Ndị na-emepụta ihe na-egosikarị ọkwa nke ụdị ha na-arụ ọrụ nke ọma, ma ịkwesịrị ịhọrọ nke dabara na ọnọdụ ị na-achọ.
Ihe nbipute 3D Resin kacha mma
Akụkụ ngwa nbipute na ndozi
Filaments na resin maka ndị nbipute 3D
Ndị na-ebi akwụkwọ 3D kacha mma
Ihe nbipute 3D kacha mma maka ụlọ
Ihe nbipute 3D kacha mma dị ọnụ ala
Otu esi ahọrọ ngwa nbipute 3D kacha mma
Ihe niile gbasara ụdị mbipụta akwụkwọ STL na 3D
Ofdị ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Zụta nyocha 3D: otu esi ahọrọ nke kacha mma
Arduino Timer: jiri oge gwuo egwu na oru gi